Motorola Otu Omume: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Motorola One Action: Ihe ọhụrụ gam akporo otu ekwentị
Dị ka ekpughere ụnyaahụ, Emeela Motorola One Action taa. Anyị na-eche ihu ekwentị nke atọ nke ika na-eji Android One dị ka sistemụ arụmọrụ. Ngwaọrụ ebuputere n'etiti ya, yana ihe ole na ole jikọrọ ya na Otu Ọhụụ gosipụtara n'afọ a. Ọ bụ ezie na ọ pụtara ìhè karịa ihe niile maka igwefoto ya, nke bụ nke na-enyekwa ekwentị aha ya.
The Motorola One Action bụ ụdị zuru oke, nke pụtara maka inwe igwefoto emereme. Nhọrọ na-adọrọ mmasị, nke na-eme ka ọ bụrụ ụdị dị iche na ụdị ụlọ ọrụ a, mana nke ndị ọrụ nwere ike ịrụ ụka adịghị ya. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị?
Ekwentị etinye aka na imepụta ọgbara ọhụrụ, nwere oghere na ihuenyo gị. Ọ dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Igwefoto dị iche iche na-echere anyị na azụ nke ngwaọrụ ahụ, nke doro anya na emepụtara iji nye ya ọfụma ka mma. Ihe mmetụta mkpịsị aka na-adịkwa na azụ ekwentị.
Motorola One Vision: Ọgbọ nke abụọ nwere gam akporo Otu bụ gọọmentị
1 Nkọwa Motorola Otu Action
Nkọwa Motorola Otu Action
Na ọkwa teknụzụ, Motorola One Action na-ekerịta ụfọdụ akụkụ na Otu Ọhụụ site ọnwa ole na ole gara aga, ka m na-eji Samsung processor na nke a. Ọ bụ ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma n'etiti etiti na gam akporo, ebe ọ nwere njirimara dị iche na mpaghara ahịa a, nke ndị ahịa ji akpọrọ ihe. Igwefoto gị nwere ike ịbụ ihe dị iche. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6,3-inch LTPS IPS na FullHD + mkpebi 2.520 x 1.080, 432 dpi
Processor: Samsung Exynos 9609 octa-core kụrụ aka na 2,2 GHz
Nchekwa dị n'ime: 128 GB (Gbasaa na microSD kaadị ruo 512 GB)
Igwe n'ihu: 12 MP nwere oghere f / 2.0
Igwefoto na-agba ọsọ: 12 MP nwere oghere f / 1.8 + 5 MP + Ultra wide-angle action camera na oghere f / 2.2
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9 achịcha (gam akporo Otu)
Batrị: 3.500 mAh na 10 W ụgwọ ngwa ngwa
Njikọ: 4G LTE Cat 6, WiFi ac, GPS / aGPS / GLONASS / Galileo, Bluetooth 5.0, USB-C
Ndị ọzọ: Ihe nkwụnye mkpịsị aka azụ, NFC
Akụkụ: 160,1 x 71,2 x 9,15 mm
Arọ: gram 176
Motorola One Action nwetara aha ya ekele igwefoto emereme na anyị nọ n'ime ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ na-eji ihe mmetụta okpukpu atọ na azụ ya, nke otu n'ime ha bụ ihe mmetụta a ma ọ bụ igwefoto ọrụ. Ọ bụ ultra wide wide nke 117º, nke na-elekwasị anya na ọrụ vidiyo. Firmlọ ọrụ ahụ na-eji Pixel Binning na nke a, na mgbakwunye na ịnwe ọnọdụ a kapịrị ọnụ iji nwee ike ịdekọ vidiyo na-eji vidio a. Ha nyere oghere na ngbanwe nke ogo 90.
Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ekwentị na-eme ọfụma n'etiti etiti. A oge a haziri, na nnukwu ihuenyo, a mma processor na-enye ezi arụmọrụ na batrị 3.500 mAh, nke ga-enye anyị nnwere onwe zuru ezu. Na mgbakwunye, ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa, nke na-aga n'ihu na ọnụnọ ahịa. N'aka nke ọzọ, a na-edebe ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ nke ngwaọrụ ahụ na nke a.
Motorola Otu Omume A ga-ere ya na ngwụcha ọnwa nke ọnwa Ọgọstụ. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ụbọchị ọ bụla maka mbido ya na Spain, mana agbanyeghị, n'ime izu ole na ole, anyị ga-enwe ike ịzụta ekwentị a na eze. Firmlọ ọrụ ahụ ekpughere nkọwa nke mmasị na nke a.
Ngwaọrụ ahụ batara n'otu ụdị, nke ga-enwe ego nke euro 279. Emebere Motorola One Action na agba abụọ, dịka ị pụrụ ịhụ na foto a kachasị elu. Ndị ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti ọcha / isi awọ na ụda anụnụ anụnụ. Ndị a ga-abụ naanị nhọrọ gbasara agba nke etiti ọhụụ ọhụrụ yana gam akporo Otu n'ime ika ahụ. Kedu ihe ị chere banyere ekwentị ọhụrụ a site na ika ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola One Action: Ihe ọhụrụ gam akporo otu ekwentị
Dr. Mario World dị anya site na ihe ịga nke ọma Nintendo tụrụ anya ya
Ihe oyiyi ndị a gosipụtara ezigbo atụmatụ nke Huawei Mate 30